Halkan ka aqriso wareysi uu siiyay Ra’iisal wasaare Cumar Cabdrashiid taleefishinka Aljazeera | Sagal Radio Services
Al Jazeera: Waa maxay sababta aad u joogtid dalka Qatar?
Omar Abdirashid Ali Sharmarke: Somalia ma aha maanta meel la dhinacyada xun laga eegi karo sida burcad badeeda iyo argagaxisada. Hadda wadanka waxa uu diyaar u yahay ganacsi waxaana aan dooneynaa in aan in cid walba oo maalgelin ku samayn karto dalka inaan codsi u gudbino. Taasna waxa ay marka dambe keeni kartaa in dhaqaaluhu uu kobco saboolnimadana ay yaraato dhalinyaradana ay ka baxaan quusta ay ku jiraan. Sidaa darteed waxaan hore u riixeynaa maalgashiga. Dalka Qatarna waxaan ka wadahadalnay sida ay maalgashi ugu sameyn kari lahaayeen Soomaaliya.
AJ: Sidee dadka maalgashiga sameeya ay idiin aamini karaan in dalka Somaaliya uu yahay meel ammaan ah?
Sharmarke: Waxaan filayaa in Somaaliya uu lambarka ugu horeeya ugaga jirto wadamada uu hoos ugaga dhacay howlaha argagaxisada dhowrkii sano ee la soo dhaafay marka aad barbar dhigto wadamada kale ee dhibaatadaa ay ka jirto. Sidaa darteed, Soomaaliya ilama aha inay tahay wadan haatan u nugul arrimahaas wadankana si tartiib tartiib ah ayuu u soo kabanayaa.
AJ: Xalay Petaganka waxa uu soo saaray war uu ku sheegayo inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan Alshabaab Adan Garar,waxana ay ku tilmaameen in ninkan uu ka mid ahaa dadkii abaabulay weerarkii lagu qaaday Westgate dalka Kenya.Ma kula tahay in duqeyntaas ay saameyn idinku yeelan karto?
Sharmarke: Kuma lahan meel ay ku nabadgalayaan argagaxisada dalka Soomaaliya. Qof walba oo dambi sameeya waa in ciqaabteeda uu helaa. Maraykanka waxaa naga dhexeya iskaashi ah in la burburiyo howlaha ay argagaxisada ka wadaan Somaaliya. ayaa naga dhexeeya. Waxaan filayaa in labadii sano ee la soo dhaafay in la qaarijiyay hogaamiyaal muhiim u ahaa Al-Shabab.
Waana taas tan uu al-Shabab u taag dareeyay waxaana dowlada isu soo dhiibaya xubno kamid ah ururkaas. Xubno sarsare oo ka mid ahna waxa ay ka mid yihiin kuwa isa soo dhiibay. Waxaana jira cafis loo fidiyay taasoo qof walba oo cambaareeya dagaalka uu ka faa’ideysan karo.
AJ: Ka waran diyaaradaha droniska?Duqeyntu waxa ay sababtaa in dad badan ay idinka soo horjeestaan sababtoo ah waxaa ay sheegaan in dad rayid ah ay ku dhintaan duqeynta. Taas ma tahay mashaakil idin haysta?
Sharmarke: Droniska waxa lagu diley hogaamiyaal muhiim u ahaa Al-Shabaab. Maraykanka iyo Soomaliya ayaana iska kaashada taas.
AJ:Cafiska Al-shabab ma yahay mid shaqeynaya?Immisa ayaana illaa iyo hadda ka faa’ideysatay?
Sharmarke: Qaar badan ayaa ka faa’ideystay. Waxaan haynaa qaar xilal sare ka hayay oo ka soo baxsaday. Waxa ay ku jiraan gacanta dowlada, waana sii wadaynaa si aysan da’ yarteena aysan wax aan waxba u tareyn loogu sirin.
AJ: Maxaad ka ledahay dadka yiraahda waa in kuwaas maxkamad la horkeenaa?
Sharmarke: Waxay ila tahay in qof walba oo cambaareeya think whoever denounces violence and is ready to become part of society again should be given a chance.
AJ: Ma kuu muuqataa waxwalba ha noqotee in ay jirto maalin aad miis la fariisanayso Al-Shabab oo aad wadahadal la gali lahayd?
Sharmarke: Waxaan filayaa in marka hore ay Al-shabaab ay cambaareeyaan rabshadaha oo dhan ayna sidoo kale cambaareeyaan dhamaan howlaha argagaxiso oo ay sameeyeen. Ma aha dhabtii cambaareyn oo kaliya balse waa inay soo bandhigaan in falalkii ay sameeyeen ay ahaayeen kuwo fool xun.
AJ: Haddii ay intaa sameeyaan ma kula tahay in Al-Shabab ay maalin uun noqdaan xisbi siyaasi ah?
Sharmarke: Waxaan filayaa in ay jiraan tiro kooban oo aad u yar kuwaaso aan marnaba rabshadaha cambaareyn doonin. Habka kaliya ee lagu xalin karo waa in la burburiyaa kuwaas, Balse qof walba o cambaareeya rabshadaha waxaan diyaar u nahay inaan soo dhoweyno.
AJ: Haddaba kuwaas sow ma geli karaan siyaasadda?
Sharmarke: Waa hab iyaga ay ku geli karaan siyaasada. Waa inay isku bedelaan si ballaaran.
AJ: Doorasho uu qof walba codeynayo ayay dowladaadu ballanqaaday inay dhacayso 2016, Balse ma xukuntaan dhammaan dalka oo idil, haddaba side buu qof walba codkiisa u dhiiban karaa?
Sharmarke: Degmooyinka ay Al-shabaab maamulaan waa tiro aad u yar. Inta badan dalka waxa uu ku jiraa gacanta dowlada. Waxaan aad u rajaynayaa in sanadka 2016ka dhammaan degmoyinka weli ay haystaan Al-shabaab ay soo geli doonaan gacanta dowlada.
AJ:Guusha aad ka gaarteen Al-Shabaab waxaa suurtogeliyay ciidamada ka socda Midowga Afrika (AMISOM), ee 20,000 ee askari ah. Goormee ayaad filaysaa in ciidamada shisheeye ay dib ugu laabtaan wadamadooda?
Sharmarke: Dhabtii ma ahayn oo kaliya AMISOM ciidamada ka guuleystey Alshabaab ee waxaa ku jira ciidamada dowlada. Waan u mahadcelinaynaa kaalmada AMISOM. Howl weyn ayayna qabteen walaalaheen. Sido kale ciidamadeena ayaa howl weyn oo lagu xureynayo dalka ka wada. Waxaa jira labo waji oo kan hore uu yahay in la burburiyo Al-shabaab kan kalana uu yahay in dib loo dhiso ciidamada qaranka oo leh dabeecadihii lagu yiqiin. Marka aan taa ku guuleysano ayaan dhimaynaa ciidamada AMISOM
AJ: Haddaba waa goortee xilliga taas ay dhici karto?
Sharmarke: Waxaan filayaa in arrintaas ay bilaaban karto 2016/2017.